Cele News Archives - Page 60 of 195 - Cele Gabar
Home/Cele News (page 60)
October 26, 2020	Cele News
မကြာသေးခင်ကမှ ထက်ထက်ရဲ့ တစ်ကျော့ပြန်အောင်မြင်မှုက ပြန်လည်စန်းထလာပြီး အောင်မြင်သူကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေလည်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ် ။ အစီစဉ်တင်ဆက်သူ ဇင်အောင်က let’s talk အစီအစဉ် နဲ့ ပရိသတ်တွေဆီက အသိအမှတ်ပြုခံထားရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့အတူ Let’s talk အစီစဉ်လေးကို ရိုက်ကူး ခဲ့ပါတယ် ။ အလုပ်တခု လုပ်တဲ့အခါ ကျွန်တော်အရမ်းစေတနာထားပါတယ် ဒီလောက်အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သူကို ချိုးနှိမ်နေကြလို့ အောင်မြင်မူဆိုတာ သူ့အတွက် ဘာဆိုတာ သိစေချင်လို့ အဲ့ concept လေး ချပြခဲ့တာ … ကြေငြာချစ်သူ page လေး က လည်း တော်တော် အထောက်ကူပေးခဲ့တာ ..let’s talk ဟာတကယ့်သွားတဲ့ concept …
ခိုင်နှင်းဝေကိုတော့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်သာမက ပရဟိတအလုပ်တွေအင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ဆောင်တာကြောင့်လည်း နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ပါ။ ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာကိုဖွင့်ထားပြီးမိဘမဲ့ကလေးများစွာရဲ့မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ ပရဟတိမိခင်ကြီးခိုင်နှင်းဝေကတော့ မိဘမဲ့ဂေဟာအပြင်အခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်း ကူညီလှူဒါန်းလျက်ရှိပါတယ်။ အခုလည်း ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့က နာတာရှည် သက်ကြီးရွယ်အို အဘိုးဘွား (၃၀)နှင့် ကလေးငယ် တွေကို ဆန်ပြုတ်ထုပ်၊ မုန့်ပုံး၊ Ovaltine၊ ဖြည့်စွက်စာ များနှင့် ဆေးအတွက်လိုအပ်တဲ့လှူဒါန်းငွေတွေကိုပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေသိရှိရအောင် “အဘိုးဘွားနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ အဟာရ ပြတ်လတ်နေသောကြောင့် ရပ်ကွက်လူကြီးများမှ တအိမ် နည်းနည်းစီ စု ၍ ဆန်ပြုတ် ပြုတ်ပီး ကျွေးမွေးနေရသောကြောင့် ကျမ တတ်နိုင်သလောက် သွားရောက် လှူဒါန်း ပြီး နို့ ဆန်ပြုတ် ကုန်ကျစရိတ်အား လှူတန်း ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါတယ်..ကျမ နဲ့ အတူ ခုနှစ်သားသမီးအလှူရှင်များ …
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂရေဟမ်ကတော့ ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးနေရတဲ့ တေးသံရှင် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အနုပညာလောကမှာလည်း အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂရေဟမ်က အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း သာယာပျော်ရွှင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လို့ ဆိုရမှာပါ ။ ယောက္ခမကြီးလို့ ပရိသတ်တွေစနောက်ကြတဲ့အထိ လှပလွန်းတဲ့ သမီးလေး ပန်းရောင်ခြယ်နဲ့ ပန်းသွန်းခြယ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပြီး ဂရေဟမ်တို့မိသားစုလေးကို ပရိသတ်တွေက အရမ်းကိုအားကျနေကြတာပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ဂရေဟမ်က ၁၉၉၇ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ဥပဒေဘွဲ့ယူတုန်းက .. ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးရယ် သမီးကြီးရယ် ကျွန်တော်ရယ် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ဘွဲ့ယူစဉ်က မိသားစုအမှတ်တရပုံရိပ်လေးကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ ပန်းသွန်းခြယ်လေး မပါသေးလို့မေးနေတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို သမီးငယ်လေးမမွေးသေးဘူးလို့ ပြောပြထားပါသေးတယ် ။ ပန်းရောင်လေးကတော့ ငယ်ငယ်ထဲကချစ်ဖို့ကောင်းသလို ဂရေဟမ်ကလည်း …
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် Sinon ကတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို လာရောက်လုပ်ကိုင်နေ တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရဟိတ စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ မကြာခဏ ဆိုသလို အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်တတ်ပြီး ကြင်နာမှုအပြည့်ရှိတဲ့ Sinon ကို ပရိသတ်တွေကလည်း လေးစားချစ်ခင်ကြပါတယ် ။ ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ (၂၆)နေ့မှာတော့ Sinon က ရန်ကုန်မှာ ‌Lockdown မိနေတဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအချို့ကို ဆန် ခေါက်ဆွဲ ငါးသေတ္တာနဲ့ ဆီအချို့ပေးဝေခဲ့ပါတယ် ။ Sinon က သူ တတ်နိုင်သလလောက်လေးနဲ့ သူတို့ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်လို့လည်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။ အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ ဆင်းရဲနွမ်းပါသူတွေကို ဘယ်‌တော့မှ မေ့မထားပါနဲ့လို့လည်းပရိသတ်တွေကို အကြံပေးစကားဆိုခဲ့ပါသေးတယ် ။ …
ဝေဘာဂီမှာ Q ဝင်နေတဲ့ ဦးကျော်သူရဲ့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေ Negative ထွက်
ပရဟိတအလုပ်တွေ လုပ်ဆောင်ပြီး အများအကျိုးသယ်ပိုးနေတဲ့ ဦးကျော်သူတစ်ယောက် ကိုဗစ် Positive ကြောင့် ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးမှာ Q ဝင်နေရတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေက စိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ကြတာပါ ။ ဦးကျော်သူတစ်ယောက်လည်း ဆေးရုံတက်နေစဉ်ကာလတွေမှာ ဘုရားတရားကို အရင်ထပ်ပိုလုပ်ခဲ့တာ ပရိသတ်တွေလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါနော် ။ လတ်တလောမှာတော့ ဦးကျော်သူက သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကို ကြေညာခဲ့ပါတယ် ။ N ကွ! ဆိုတော့ မင်းတို့နည်းတူ ငါလည်းဝမ်းသာမိတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် ဒါတစ်သက်လုံး “N” ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် … ငါ ဒါလေးရေးပေးလိုက် တယ်။ ဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီး အပျော်မကြူးကြနဲ့။ မပေါ့ကြနဲ့။ လွတ်လပ်ပြီဆိုပြီး လမ်းမထွက် ဆေးရိုးလှမ်းကြသလို ဖြစ်ကုန်တော့မယ်။ သတိ! အသိ!အမြဲ …
မနေ့ကထိ အကောင်းကြီးရှိနေခဲ့တဲ့အဖိုး ဆုံးပါးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာမျှဝေလာတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်
သရုပ်ဆောင်ဥက္ကာမင်းမောင်ကတော့ လက်ရှိ နယူးယောက်မြို့မှာ နေထိုင်နေသူဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာပြည်ကပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်သွယ်မပြတ်ရအောင် သူ့ရဲ့တနေ့တာအကြောင်းအရာလေးတွေကို နေ့စဉ်နီးပါးမျှဝေပေးနေသူပါ။ မကြာသေးခင်ကမှ ခေတ်မှီတဲ့အဘိုးဖြစ်သူအကြောင်း ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ မနေ့ကထိအကောင်းကြီးရှိနေတဲ့ အဘိုး ဆုံးပါးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးကို စိတ်မကောင်းစွာမျှဝေလာပါတယ်။ ချစ်လှစွာသော အဖိုး ဒီနေ့မနက်ကပဲ အေးချမ်းစွာ သူချစ်တဲ့မိသားစုကို နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီ.. မကြာခင်ကပဲ Facetime ခေါ်လို့ စကားတွေပြောရယ်မောနေခဲ့သော ကျွန်တော့် အဖိုး.. ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကိုယ်က မြေးဦးဆိုတော့ အဖိုးတို့ အဖွားတို့ လက်ထဲပဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့တာ.. သူ့မြေးအကြောင်းကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တိုင်း အမြဲ ကြွားတတ်သော ကျွန်တော့်ရဲ့အဖိုး.. အသက် (၉၀) ကျော်အရွယ်အထိ အဖိုးရဲ့ဘဝတလျောက်လုံး အေးအေးချမ်းချမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ ဖြတ်သန်းသွားခဲ့တယ်.. မနေ့ကထိလဲ အကောင်းကြီး.. ဒီနေ့မနက် …
မသန်စွမ်းသူများ ကိုဗစ်-၁၉ အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီအဖွဲ့ကို အလှူငွေများသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နော်ဖောအယ်ထား
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသူလေးနော်ဖောအယ်ထားကိုတော့ ပရိသတ်တွေသိကြမှာပါ။ တက်သစ်စမော်ဒယ်လ်၊မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ချစ်စရာကောင်းပြီးရိုးရှင်းတဲ့အလှတရားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နော်ဖောကတော့ ပုရိသတွေရဲ့ဝန်းရံအားပေးခြင်းကိုလက်ခံရရှိထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နော်ဖောကတော့ သူ့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပရိသတ်တွေကိုဖေ့ဘွတ်ခ်ကနေပြီး မျှဝေပေးလေ့ရှိသလို အခုလည်းသူလှူချင်တဲ့အလှူလေးပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ နော်ဖောကတော့ မသန်စွမ်းသူများ ကိုဗစ်-၁၉ အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ အဖွဲ့ကို အလှူငွေ (၁၀) သိန်း လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးများနဲ့ မသန်စွမ်းအမျိုးသမီးများ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်း (၁၆၀၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ Sanitary Pad အထုပ် ၁၆၀၀) ကို Sofy Myanmar ကနေပြီးတော့လည်း ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာ အလှူရှင်တွေကတော့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီး လှူဒါန်းနေကြတာကို နေ့စဉ်တွေ့နေကြမှာပါ။ စိတ်ထားကောင်းတဲ့နော်ဖောကလည်း (၁၀)သိန်းကျပ်ကိုလှူဒါန်းခဲ့သလို Sofy Myanmar ကလည်း အမျိုးသမီး လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေ …
သဒ္ဓါထက်သန်တဲ့အလှူရှင်တွေကြောင့် မထင်မှတ်ထားလောက်တဲ့အလှူငွေပမာဏကို Live Donation ကနေပြီးတော့လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်း
ချစ်သုဝေနဲ့လင်းလင်းတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ပြီး ကူညီမှုတွေပြုလုပ်နေတာ ပရိသတ်တွေသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာတော့ အနားယူတယ်လို့မရှိရအောင်ကို လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို မပြတ်တမ်းကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုနေတာလည်း လေးစားစရာတွေ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင်ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ အွန်လိုင်းကနေပြီး အလှူခံတဲ့ live donation အစီအစဉ်လေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မထင်မှတ်ထားတဲ့အလှူငွေပမာဏကိုရရှိခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ ချစ်သုဝေရဲ့ပေချ့်မှာ “Live Donation အား စိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့် စောင့်ကြည့်လှူဒါန်းပေးကြသော စေတနာရှင်/အလှူရှင်များအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။၂၄.၁၀.၂၀၂၀ ည (၇.၀၀ ) မှစ၍ Chit Thu Wai Facebook Page မှ Live လွှင့်ကာ Covid (19)ကာလအတွင်း ဆေးရုံများနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား လှူဒါန်းရန်အတွက် အလှူငွေ ကောက်ခံရာ ၂၅.၁၀.၂၀၂၀ နေ့လည်(၃.၀၀) အထိ Live …
အများတကာအားကျရတဲ့အချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို အလှူအတန်းရက်ရောလွန်းတဲ့ စည်ဖြိုးတို့မိသားစုလေးအတွက် ဒီနေ့မှာ သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ စည်ဖြိုးရဲ့ချစ်ရသူလေးခင်လွှမ်းဆီမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရတဲ့ သတင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စည်ဖြိုးနဲ့ခင်လွှမ်းတို့ကတော့ အလှူအတန်းလုပ်လည်းအတူ စီးပွားရေးလုပ်လည်းအတူ စိတ်တူကိုယ်တူချစ်သူတွေဖြစ်ကြသလို မကြာတော့မယ့်အချိန်တစ်ခုမှာ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ စီစဉ်ထားကြသူတွေပါ။ မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်သီသီဝင်းကတော့ စည်ဖြိုးရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ထွက်ပြီးချိန်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလေးလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် ကိုဗစ်ကြောင့် အရာရာနောက်ဆုတ်ခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မိသားစုအတွက် ပထမဆုံးမြေးဦးလေးရရှိတော့မှာမို့ အန်တီဒေါ်သီသီဝင်းကိုယ်တိုင်လည်း သားကြီးဆီကသတင်းကောင်းလေးကို ပျော်ရွှင်စွာမျှဝေခဲ့သလို စည်ဖြိုးကိုယ်တိုင်လည်း မမျှော်လင့်ဘဲ ရခဲ့တဲ့ကိုယ်ဝန်လေးကို အံ့သြဝမ်းသာမိကြောင်း ပရိသတ်ကြီးကို မျှဝေလာပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာ ပထမဆုံးမျိုးဆက်သစ်လေး ရရှိတော့မယ့် စည်ဖြိုးတို့မိသားစုအတွက် ဝမ်းသာစကားလေးပြောခဲ့ပါဦးနော်။ Source – Si Phyo Rainbow- Cele …
ဒီနေ့မှာ မီးမီးခဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပြီး ဆုတောင်းအပ်နှံခြင်းလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောလာတဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Brice
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀) ရက်ကပဲ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မီးမီးခဲကြောင့် ပရိသတ်တွေလည်း များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြမှာပါ။ နိုင်ငံခြားရပ်ခြားမှာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေး တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သလို နောက်ဆုံးအနေနဲ့လည်း မြန်မာပြည်က ပရိသတ်တွေအတွက် တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးပွဲလေးလုပ်သွားပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ မီးမီးခဲကတော့ လောကကြီးက စောစောထွက်ခွာသွားခဲ့ရပေမယ့်လည်း သူ့ကို မေ့မရနိုင်မယ့်သူတွေတော့ အများကြီးကျန်ရှိနေခဲ့မှာ အမှန်ပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ မီးမီးခဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို နှုတ်ဆက်အပ်နှံခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Brice ကမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အားလုံး ချစ်ရတဲ့ မီးမီးခဲဟာ အောက်တိုဘာလ (၁၆)ရက်နေ့မှာ ဘုရားရှင်ရဲ့ ရင်ခွင်တော်သို့ ပြန်လည်‌ခေါ်ယူတော်မူခြင်းကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်…ဒီနေ့ အောက်တိုဘာလ (၂၆)ရက်နေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်များ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အတူ ဆုတောင်းဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းအစီစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ဆိုပြီး မီးမီးခဲရဲ့ ဖေ့ဘွတ်ခ်ပေ့ချ်ကနေတဆင့် မျှဝေလာပါတယ်။ …